Na-achọ nlezianya anya nleba anya? Disposable Non-invasive EEG sensọ kwesịkwara ịba uru karịa ~ ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Med-njikọ
Kpọọ Anyị: (86) 400-058-0755
SpO2 nkwụnye Gịnị
Disposable SpO2 sensọ
Direct-Jikọọ ECG Gịnị
ECG Ogwe Ogwe
Direct-Jikọọ EKG Gịnị
EKG akpati Gịnị
Lee / EMG
Disposable ná Nkụnwụ mmetụta
IBP nkwụnye Gịnị
IBP Infusion akpa
Reusable okpomọkụ Nyocha
Disposable okpomọkụ nyocha
Disposable Anọpụ Electrodes
CO2 nlekota ngwa
Nyocha ụlọ ọgwụ
Na-achọ nlezianya anya nleba anya? Ihe mmetụta sensọ EEG ndị na-enweghị mbibi na-achọkwa ịba uru karịa ~
Igodo nke anesthesia na ICU bụ nyocha nlebara anya. Kedụ ka anyị ga - esi nweta nleba anya nyocha dị omimi? Na mgbakwunye na mkpa ọ dị maka onye na-ahụ maka ọgwụ anesthesiologist, onye na-ahụ ọgwụ anesthesiologist dị omimi monitorand nwere ike iwepu ihe mmetụta EEG nke ejiri ihe nyocha anesthesia ga-adị ike.
Disposable Non-invasive EEG sensọ
Anyi maara na omimi anaestisia bu ogo aru na-egbochi aru mmadu site na nchikota nke anesthesia na nkpali na aru. Dika anesthesia na mkpali na-abawanye ma na-ebelata, omimi nke anesthesia na agbanwe dika.
Anesthesia omimi nlekota kemgbe nchegbu nke anesthesiologists. Oke miri emi ma ọ bụ nke miri emi ga-akpatara ndị ọrịa mmerụ ahụ ma ọ bụ nke uche. Nọgide na-enwe omimi nke nhụjuanya dị mkpa iji hụ nchekwa nke onye ọrịa ma nye ọnọdụ ịwa ahụ dị mma.
A na-akọ na BIS nwere mmekọrịta dị mma na itinye uche nke ọgwụ ndị na-akụnwụ ahụ, yabụ maka nduzi nke ọgwụ ọgwụ anestetiiki na-ejikarị arụ ọrụ, ojiji nke BIS nlekota, dị ka nsonaazụ nlekota si eduzi ojiji nke ọgwụ na-akụnwụ ahụ, nke nwere ike ịka mma omimi nke ahu ogwu na-egwu ezigbo anestetiiki.
Site na mmepe nke teknụzụ nlekota nke EEG na afọ ndị na-adịbeghị anya, BIS (bispectralindex) aghọwo usoro a ghọtara maka nlezianya nleba anya nke ọnọdụ ọrụ ụbụrụ ụbụrụ na mgbanwe, enwere ike iji ya dị ka usoro nlekota omimi nke anesthesia na usoro ọgwụgwọ.
BIS bụ ọnụọgụ ọnụ ọgụgụ sitere na ndekọ EEG nke ugboro abụọ nke mmepụta nke ọgwụ ọgwụ anesteti dị iche iche na nnukwu ihe atụ. Enwetara data a karịsịa site na nnukwu isiokwu nke isiokwu na-anata ọgwụ anaesthesia abụọ na-etinye ihe ndekọ EEG ugboro abụọ, yana ọnọdụ nke nsụhọ, nkwụsị izu ike, na EEG e dere ede ghọrọ nchekwa data. Mgbe ahụ, dabere na ụdị elektrọniksịfalogram (EEG) na ike dị iche iche, a na-agbakwunye ọnụ ọgụgụ nke ozi agwakọtara nke enwetara site na nyocha na-enweghị atụ nke usoro na nkwekọrịta.
BIS bụ naanị ntinye akwụkwọ nchịkwa na-akụnwụ ahụ nke US FDA kwadoro, nke nwere ike nyochaa ọnọdụ ọrụ ụbụrụ na mgbanwe dị mma karị, nwere mmetụta ụfọdụ ịkọgharị mmegharị ahụ, mmata intraoperative, na ọnwụ na mgbake nke nsụhọ, ma nwee ike belata ọgwụ ọgwụ anesteti ahụ. ụzọ ziri ezi karị na-ekpe ikpe larịị izu ike na nyochaa omimi nke ịestụ ọgwụ mgbochi site na EEG.
BIS nlekota ndeksi
BIS uru 100, ala anya; BIS bara uru 0, ọ dịghị ọrụ EEG (mgbochi ụbụrụ na-egbochi ụbụrụ), (mgbochi ụbụrụ). A na-ewere BIS uru dị ka ihe dị n'etiti 85 na 100. 65 ~ 85 na-akụda mmụọ; 40 ~ 65 bụ ọgwụ na-akụnwụ ahụ. <40 Mee ka iwepụ iwe.
Iji nyochaa omimi nke nkwụsị nke nkwụsị na oge dị oke egwu, ihe nkedo nke na-enweghị ihe mgbochi nke ejiri nlezianya nyochaa kwesịrị ịba uru, nke mere na ọnụ ọgụgụ ndị na-egosi na steeti ọ bụla nwere ike igosipụta n'ụzọ ziri ezi.
Shenzhen Med-njikọ Electronics Tech Co., Ltd (nke a na-akpọzi Med-linket) nwere afọ 15 nke ahụmịhe nyocha na mgbakọ ọgbakọ ọgwụ. Mgbe ọtụtụ afọ nke nyocha ahụike, anyị ejirila aka anyị mepụta ihe mmetụta EEG nwere ike iwepu, bụ nke kwekọrọ na nyocha nyocha nke anaesthesia na BIS modulu dịka Mindray na Philips. Ihe nlele ahụ dị nro, uru ọ dị ziri ezi, yana ikike mgbochi nnyonye anya siri ike. Ọ na - enyere anesthesiologist aka iji nlezianya nyochaa onye ọrịa na - amaghị ihe ọ bụla ma nyekwa ya njikwa yana usoro ọgwụgwọ n'oge dịka ọnọdụ nlekota.
Họrọ Med-linket non-invasive EEG sensor, mata ogo Med-linket ọkachamara, afọ iri na ise nke ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ, na ụwa, yana ihe eji arụ ọrụ ọgwụ na-akwụ ụgwọ, nyere aka maka ụdị ụlọ.
* Nkwupụta: ụghalaahịa niile edenyere aha, aha, ụdị, wdg. Egosiri na ọdịnaya dị n'elu bụ nke onye nwe ya ma ọ bụ onye mepụtara mbụ ya. A na-eji edemede a gosipụta ndakọrịta nke ngwaahịa Med-Linket. Enweghị nzube ọzọ! Ihe niile dị n'elu. ozi a bu maka ntughari ya, ekwesighi iji ya mee ihe oru nke ulo oru ogwu ma obu ndi ozo. Ma ọ bụghị ya, nsonaazụ ọ bụla nke ụlọ ọrụ a kpatara enweghị ihe jikọrọ ya na ụlọ ọrụ a.
Previous: Philips MX40 at Kwekọrọ n'Ozizi ECG Telemetry Leadwires ET035C5I
Osote: D-YS at Kwekọrọ n'Ozizi reusable Multi-saịtị SPO2 sensor
Post oge: Dec-06-2019
Shenzhen Ahụike-njikọ Electronics Tech Co., Ltd.
Ekwentị: (86) 400-058-0755